Isbahaysiga KULMIYE oo Burco kala Kulmay Taageero xanuun ku Riday Muuse Biixi Iyo Madaxtooyadda | Saxil News Network
Isbahaysiga KULMIYE oo Burco kala Kulmay Taageero xanuun ku Riday Muuse Biixi Iyo Madaxtooyadda
Kala Xasuus iyo Xiiso badan marka Xil ama Xoolo lagugu soo dhoweeyo Iyo marka Kalgacayl iyo Mabd’a lagugu soo Dhawaynayo”
Burco ( SAXILNEWS/Yool)_Isbahaysiga garabka Dimuquraadiyad doonka ee Xisbiga KULMIYE, ayaa dhoola-tus Siyaasadeed ku sameeyey Qoysta, Qasabka ila Baarsiigo, kaddib socdaal lama filaan ah oo ay halka ku tageen qaar kamid ah xubnihii ka biyo diiday ka qayb galka shirkii golaha dhexe ee Kulmiye, sidoo kale-na ka dhaqaaqay xilalkii ay ka hayeen Xumuukadda Madaxweyne Siilaanyo. Safarka xubnahan oo marka si loo eego ah mid dad badani hore usii saadaalinaayey, waxa xubnaha Goyaasha Maxamuudiga ah kusii jeeni qaartay ee Safarka Sahanka leh daadihinaayey kamid ah Wasiirkii hore ee Masaxtooyadda, Wasiirkii hore ee Arrimaha Bulshada iyo Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee Xisbiga KULMIYe, Xildhibaan Cabdicasiis Dhulcun iyo Mudane ka tirsan Golaha Wakiiladda.
Haddaba, marka laga soo tago khilaafka KULMIYE iyo Hargeysa, safarka xubnahani ku tageen Burco, ayaa u muuqda inuu yahay mid iftiiminaya Sawiiro kale, oo marka la isku geeyo micno sameynaaya. Waana mida ugu weyn ama ugu mihiimsan ee dhaadhanka iyo damciyadda u sameysay booqashada ceelka Toga-dheer. Inkastoo Gobolka Togdheer markiisa horeba uu yahay meel xasaasi ah oo Siyaasadda iyo Ganacsigaba labada-ba lagu Xawaasheeyo, haddana tani waa tu ka duwan taa oo xambaarsan farrin tebineysa odhahda Midnimada Bariga Iyo Galbeedka. Meeshu waa Burco, xilligu waa Jiilaal, waxaana kaabiga inagu-soo haysa doorasho. Dammacu waa halkiise, ‘Rag’se Walaal wuxuu ku dhaamo la waa’. Haddii aan usoo noqdo booshada xubnahani kala kulmeen Gobolkii ay u dhasheen, waxa ay sheekadu u dhacday sidan:
Dadweyne tiradoodu Boqolaal Kun kor-u-dhaaftay, ayaa degmada Qoyta oo dhinaca Waqooyi ka kulaalaeyso degmada Sheekh, dhanka Bari-na Ceelka Burco caasha ku hayo, waxa ay kaga horyimaadeen Masuuliyiintan aynu kor kusoo sheegnay, kuwaasoo sida lagu sheegay xoggoWargeyska Yool helay, iyagu hiirtii Wabari ee shalay ka hor intii aan Nin iyo Geed la kala garan ka baqoolay Magaalada Hargeysa.
Dadweynaha reer Burco oo sida lagu yaqaan ah dad araagti fog, oo Xamaasaduna aanay ka madhnayd, waxa shucuurtooda shalay laga dhahanaayey muuqaalo iskugu jira Jibbo ficil leh iyo taageero aanu hiilka madhnayn. Waxa kaloo, shucuubta reer Togdheer ee taageerada li’xaadka leh xubnahan u muujiyey damaashaadka soo dhoweyntooda kaga qayb galeen, Fardo iyo Gaadiid aad u tiro badan, iyadoo sidoo kale, jidadka Magaalada iyo hareeraha uga baxa ay saf-saf u taagnaayeen dadweyne isugu jirey Odayaal Gadh-caseyaal ah, Madaxdhaqameed, aqoonyahan, Haween iyo Dhalinyaro, kuwaasoo qaarkood ku tiraabayeen weedho iyo kelmado xadanto leh, halka kuwo kale-na ay lulaayeen boodhadh lagu soo xardhay halku dhigyo wadareed iyo Sawirrada xubnaha waftiga.
Xubnaha garabka is-bahaysiga Dimuquraadiyad doonka ah, oo dadweynaha goob fagaare ah kala hadlay, ayaa kasekow mahadnaqa soo dhoweyntooda, waxa ay ku mudeen ama ku dureen farriin ka turjumeysaa dulucda fasarkooda, oo aanu ka madhnayd khilaafka Xisbiga KULMIYE iyo Masiirkooda danbe ee siyaasadeed.
Horaa loo yidhi: ‘Dhawaq meel dheer ayuu ku dhaca Dhagaxna meel dhow’e’. Md. Xirsi Cali X Xasan oo hadaladiisu u dhaadhamayeen farriimo duurxul ah, oo badhna uu Hargeysa u diraayey qaarkoodna uu kula hadlayey reer Burco, waxa uu yidhi, “..Waxanu fahmaynaa Maanta anagoon xil hayn in nala soo dhoweynayo. oo nalagu soo dhoweynayo kalgacal, dadkayaga oo na rabba, oo na jecel. Way kala qiimo badan tahay marka qofka Madaxnimada iyo kursiga uu ku fadhiyo lagusoo dhoweynaayo ama (Lacag/shilin) lagu soo dhoweynaayo, iyo marka qalbigooda, dareenkooda iyo kal-gacal ay ku hayaan kugu soo dhoweynayaa. Intaa Kulmiye ee halkan maraysaa iyo inta naga maqan waanu idiin mahadnaqaynaa..”.
Sidoo kale, Dr Cabdi Aw Daahir Wasiirkii hore ee Arrimaha Buslahda, oo isna halka ka hadlay, ayaa dadweynaha reer Burco kula dul-kufay weedho iskugu jiray dar-daaran iyo waano Gobolnimo, waxanu yidhi, “..Waxanu u nimid inaad danta u midowdaan, horumarka u midowdan, waxa kaloo idiin sheegaya hadii aanu nahay isbahaysigii dimuquraadiyad doonka, shirkii ka dhacay Hargeysa waxa uu ahaa mid Xaaran ah, wixii kasoo baxaynaa waa Xaaran..”.
Dhanka kale, Gudoomiye-ku-xigeenka labaad Xisbiga KULMIYE Xildhibaan Waabeeye, waxa hadalladiisi ka mid ahaa “..Intii aan Siyaasadda ku jiray maan arag Burcoo sidan u mideysan. halkan waxa marayaa dadkii Midnimada Burco ka shaqeyn jiray, wanaaga, isku soo dhowaanshaha. Waxad ka war qabtaan shirkii ka dhacay Hargeysa oo ahaa mid afduub ah, sida darteed maadama oo aad tihiin Taageerayaashada waxanu idiinku nimi inaanu idiinla tashano, waynu wada-haldeynaa oo midnimada Burco ayeynu ka tashanaynaa. Waxan idiin sheegayaa hadaad reer Burco tihiin, Diiwaan-gelin-baa socotaa ee inaynu ka qayb galaa Diwaan-gelinta si aan la inooga cod badan, wixii danbe fadhi ayeynu isku odhan doonaa”.
Dhanka kale, qaar kamid ah Odayaasha dhaqan waxgaraadka iyo Taageerayaasha garabkooda ee KULMIYE-ha gobolka Togdheer oo cabiraayey dareenkooda ku aadan xubnaha waftiga waxa ereeyadoodii kamid ah. “..Muuse waxaanu leenahay gaadhi faaruq ah baa lagugu wareejiyaye waa kaas shacabkii KULMIYE..”. Sida waxa yidhi gudoomiyaha qaban-qaabada soo dhoweynata waftiga Axmed Cige Yare. Sidoo kale, mid kamid ah taageerayaashi goobta ka hadlay ayaa xusay in Xisbiga Kulmiye inuu ka koobnaa dhoobo iyo xareed, hadana ay Burco kusoo dhoweynayaan Xareedi KULMIYE. “..KULMIYE wuxuu ahaa dhoobo iyo xareed, waxanu soo dhoweynaya xareedi, waxanu soo dhoweynaynaa aqoonyahankii iyo Hiddo dhaladkii Togdheer. ragga leh (KULMIYE) waa nalagu wareejiyey waxan leeyahay Burco waata..”.
Sidoo kale, xubin kamid ah taageerayaashi halkaa ka hadlay, ayaa xusay in aanu waxba tarin Xisbi la isku waraajiya, balse muhiimaddu ay tahay dadka, isagoo arrinta ka hadlaya waxa uu yidhi “..Waxa lagu kala baxayaa cod, mahaa shaqsiyaad meel la iskugu geeyo, Muuse Bixii iyo dadkii kale ee qolka Maansoor lagu xareeyey, waxanu u sheegaynaa, in waxa lagu kala baxayaa uu yahay hal cod. Hadii la yidhi Ragga halkan marayaa cidla ayey joogan, Maanta arka Burco sida ay tahay..”.
Si kastaba ha ahaatee, xubnaha waftigan ayaa la filayaa maalmaha fooda inagu soo hayaa ay ku sugnaan doonaan magaalada Burco, iyagoo intaa ay joogan la filayo inay kulamo la yeelan doonaan qaybaha bulshada gobolka. Docda kale, wararka naga soo gaadhaya gobolka Toghdeer qaarkood, ayaa tibaaxay in qaar kamida xubnaha waftiga maalmaha fooda inagu soo hayaa u gudbi doonaan Buhoodle iyo Caynaba. Dhanka kale, Shil gaadhi oo sababay khasaare iskugu jira dhamasho iyo dhawac ayaa ka dhacay duleedka Magaalada Burco, kadib markii ay isku dhaceen laba kamid ah gadiidkii soo dhoweynayey xubnaha waftiga isbahaysiga KULMIYE, waxana dagu dadka ku dhaawacmay lagu daweynayaa Cisbitaalka Magaalada Burco.